သက်တန့်ချို: လူသားဆန်မှု ( Humanity ) ပုံပြင်လေးတစ်ပုဒ်
တခါတုန်းက ဆရာဝန်တစ်ယောက်ဟာ အရေးပေါ် ခွဲခန်းကနေ အရေးပေါ်ခေါ်ယူခြင်းခံရတဲ့အတွက် ဆေးရုံကို ချက်ချင်းရောက် လာခဲ့တယ် ။ သူဟာ ဖုန်းကို အမြန်ပြောပြီး အ၀တ်အစားလဲ ပြီးနောက် ခွဲစိတ်ဆောင်ထဲကို အလျှင် အမြန်ဝင်သွားခဲ့တယ် ။ နံရံကိုမှီပြီးဆရာဝန်အလာကို စောင့်နေရတယ်လို့ထင်ရတဲ့ လူနာရဲ့ဖခင် ကို တွေ့ လိုက်ရတယ် ။ ဆရာဝန်ကို မြင်တဲ့အခါ လူနာဖခင်က ပြောဆိုခဲ့တယ် ။ ` ဘာကြောင့် အခုလို အချိန်အကြာကြီးမှ လာရသလဲ ဆရာ . . ကျွန်တော့်သား ဘ၀ဟာ အန္တရာယ်နဲ့ကြုံနေရပြီဆိုတာ ခင်ဗျားမသိဘူးလားဗျာ ဒီအတွက် ခင်ဗျားမှာ တာဝန်ရှိတယ်လို့ မထင်မိဘူးလား ´
ဆရာဝန်ကပြုံးပြီးပြောခဲ့တယ် ။ `စိတ်မကောင်းပါဘူးဗျာ ကျနော် အမြန်ဆုံးလာခဲ့ပါတယ် ဆေးရုံက ဖုန်းဆက် ဆက်ခြင်းကျနော် က ဆေးရုံမှာမရှိနေခဲ့ပါဘူး ဖုန်းဝင်လာလာခြင်းအမြန်လာခဲ့ပါတယ် ဒါကြောင့်အခုချိန်မှာ စိတ်အေးအေးထားပါ ဒါမှကျနော်အေးအေးအလုပ်လုပ်နိုင်မှာမို့ပါ ´
` ဘာ . . စိတ်အေးအေးနေရမလား ခင်ဗျားရဲ့သားသာ အခုလို အခန်းထဲမှာ ရှိနေရရင်ခင်ဗျားဘယ်လိုနေမလဲ ခင်ဗျားရောစိတ်အေးအေးထားနိုင်မလား ? အခုချိန်ခင်ဗျားသားသေသွားခဲ့ရင် ခင်ဗျားဘယ်လိုလုပ်မလဲပြော ´ လူနာရဲ့ဖခင်က ဒေါသတကြီးပြန်ပြောခဲ့တယ် ။
ဆရာဝန်က ထပ်ပြီးပြုံးလိုက်ပြီးပြန်ပြောတယ် ။ `ဒီလိုရှိတယ်ဗျ အလုပ်အကိုင်နဲ့ပတ်သတ်လို့ Holy Book မှာ ဒီလိုရေးထားတယ် . . ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာ မြေမှုန်တွေကနေလာကြရတယ် ပြီးနောက် မြေမှုန်တွေ အဖြစ်ပြန်သွားကြရတယ် ဘုရားသခင်ရဲ့ ဂရုဏာတော်နဲ့ ကောင်းချီးပေးတော်မူပါလိမ့်မယ် ´ တဲ့ ဆရာ ၀န်တွေ လည်း သက်တမ်းအကြာကြီးနေရတာမဟုတ်ပါဘူး ခင်ဗျားရဲ့သားကို အကောင်းဆုံး ဆုတောင်းပေး ပါ ဘုရား သခင်ရဲ့ ဂရုဏာတော်အတိုင်း ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးကြိုးစားကြပါမှာ ´
`တစ်ခုခုဟာ မလွယ်ကူတော့ဘူးဆိုရင် ဒီလိုပဲ ပြောကြတာပါပဲ ´ လို့ လူနာအဖေက စိတ်မသက်မသာနဲ့ ညည်းတွားပြောဆိုခဲ့တယ် ။ ဒီလိုနဲ့ ခွဲစိတ်မှုဟာ နာရီပေါင်းများစွာ ကြာမြင့်ပြီးတဲ့နောက် ဆရာဝန်က ပျော်ရွှင်စွာ ခွဲစိတ်ခန်းထဲကနေ ထွက်လာခဲ့တယ် ။ ` ဘုရားသခင်ကိုကျေးဇူးတင်ပါ ခင်ဗျားသားရဲ့ အသက်ကို ကျွန်တော် တို့ကယ်လိုက်နိုင်ပါပြီ ´ အဲဒီလို ပြောပြီး ဆရာဝန်က လူနာဖခင်ရဲ့ ပြန်ပြောတာကိုတောင်မစောင့်နိုင်တော့ပဲ သူ့လမ်း အတိုင်းအပြေးထွက်သွားခဲ့တယ် ။ ` ခင်ဗျားမှာ မေးစရာရှိရင် နာ့စ်ကိုသာမေးပေတော့ဗျို့ ´ လို့ ပြေး ရင်းနဲ့ပြောသွားခဲ့တယ် ။
` ဘာကြောင့် သူ ဒီလောက်အလျှင်လိုနေရတာလဲ ငါ့သားအကြောင်း ကို မေးဖို့ မိနစ်အနည်းငယ်ကိုတောင် သူ မစောင့်နိုင်ပါလား ´ လို့ ဆရာဝန်ထွက်သွားလို့ မိနစ်အနည်းငယ်မှာ နာ့စ်ရောက်လာတဲ့အခါ သူက နာ့စ်ကို ပြောဆိုခဲ့တယ် ။ အဲဒီအခါ နာ့စ်က မျက်ရည်တွေကျရင်းနဲ့ လူနာရဲ့ဖခင်ကို ယခုလိုပြန် လည်ပြောဆိုခဲ့တယ် ။
`မနေ့က ဆရာသားဟာ ကားတိုက်မှုဖြစ်လို့ သေဆုံးသွားခဲ့ရပါတယ် ရှင့်သားရဲ့ခွဲစိတ်မှုအတွက် ဆရာ့ ကို ခေါ်တုန်းက ဆရာက သူ့သားနာရေးအတွက် သုဿန်မှာရှိနေခဲ့ပါတယ် အခု သူက ရှင့်သားအသက်ကို ကယ်ပေးခဲ့ပါပြီ အခု သူ့သား အလောင်းမြေကျဖို့အတွက် သူ သုဿန်ကိုပြေးသွားရခြင်းဖြစ်ပါတယ် ´
လူ့ကျင့်ဝတ်နဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုတာမှာ မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်အတွက် သီးသန့်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ ဥပဒေသရယ်လို့မရှိပါဘူး ။ ခင်ဗျားဟာ သူတို့ရဲ့ ဘ၀မှာ ဘာတွေဖြစ်ပျက်နေတယ်ဆိုတာနဲ့ ဘာကြောင့် ပြေးလွှားနေရသလဲဆိုတာ သိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး ။ ဒီအရာကို လူသားဆန်မှုလို့ ခေါ်ပါတယ် ။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်ဘ၀ချည်းပဲ အဆိုးတွေကြုံနေရတယ်လို့ မတွေးပါနဲ့ လူတိုင်းမှာ လည်း သူတို့ဒုက္ခနဲ့ သူတို့ရှိကြပါတယ် ။ ကိုယ့်ဒုက္ခအတွက် သူများကို အပစ်တင်မစောပါစေနဲ့ သူတို့မှာလည်း သူတို့ အကြောင်းနဲ့သူတို့ ရှိပါလိမ့်မယ် ။ ကျွန်တော်တို့အားလုံးမှာ စာနာနားလည်နိုင် မှုနဲ့ တွေးတော ဆင်ခြင် တတ်ခြင်းတွေသာရှိနေရင် ကမ္ဘာမြေကြီးက ပိုပြီး လှပလာမှာအမှန်ပါပဲ ။
Posted by သက်တန့်ချို at 9:21 AM
Anonymous January 4, 2012 at 10:21 AM
khin January 4, 2012 at 1:14 PM
သိပ်ကောင်းပြီး အနှစ်အရသာရှိတဲ. ပို.စ်လေးကို ဖတ်ရတဲ.အတွက်ကျေးဇူးပါနော်
ခရစ္စတလ် January 4, 2012 at 1:42 PM
Harry January 4, 2012 at 10:45 PM
Pls. let me share & thanksalot .
Anne January 10, 2012 at 5:07 PM
really need to be patient,,,eh?
“ က ” နေသော ဒေါင်းငှက် နှင့် ဂုဏ်ယူကြွားဝါမာန်တတ်မ...
မိန်းမသားတွေဘာကြောင့် ငိုရသလဲ ?
အသက် ၁၁ နှစ်အရွယ် အငယ်ဆုံးမိခင်
မိမိဝမ်းဗိုက်ခွဲစိတ်မှုကို ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ခဲ့သော ...
ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး Cargo လေယဉ်-Antonov 225
Breaking Virus Alert !!
ကိုယ်ဝန်ရှိတယ်လို့ ထင်ခဲ့ပေမယ့် ဖရဲသီးအရွယ်ကျူမာအလ...
အပျိုစင်ဘ၀ကို ၂ကြိမ်ပြန်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသော ၂၇ နှစ်အရ...
အမျိုးသားနှစ်ဦးရဲ့ ဝှေးစေ့တွေကို ကိုတ်ဖြတ်ပြီးသတ်...
၀မ်းချုပ်တာကိုသက်သာစေဖို့ စအိုထဲ နို့ပုလင်းထိုးသွင...
အမျိုးသားတစ်ယောက်ရဲ့ ဆီးအိမ်ထဲကနေဖယ်ထုတ်ခဲ့ရတဲ့ ငါ...
လေယဉ်မှူးကိုတုန်လှုပ်စေခဲ့တဲ့ ပေ၇၀၀၀ အထက်မှ ပျံသန်း...
နော်ဝေးနိုင်ငံရှိ ကမ်းပေါ်တင်နေသော တန်၂၀ လေးသော ငါး...
ဘာကြောင့် ဒေါသထွက်နေကြရတာလဲ ?
Mobile Phone နှင့်ကျန်းမာရေး အန္တရာယ် (မျှဝေပေးကြပါ...
ကမ္ဘာပေါ်တွင် တတိယအကြီးဆုံးရေခဲတောင် Purog Kangri Gl...
ချင်ပန်ဇီမျောက်က ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်အစာချက်စားသတဲ့ !